I-tattoo ye-flash iyinqubo ethandwayo ehlobo. Phela, zibukeka zihle ezindaweni ezivulekile zesikhumba, ziphumule ngokugeza, zingaphazamisi futhi azilahleki ngesikhathi sokuzijabulisa nokudlala imidlalo. Izinkanyezi, ama-bloggers, abesifazane besimfashini - bonke baba abalandeli bale mkhuba. Indlela yokunamathela i-flash-tattoo futhi lapho umdwebo uzobukeka kangcono? Funda kuqhubeke, futhi uzothola amathiphu amaningi nemibono ewusizo.
Indlela yokunamathela i-flash-tatu ekhaya
Akunzima nhlobo futhi ngokushesha kakhulu. Uma usumncane usetshenzisile izithombe eziphathekayo, uzothola ukuthi umkhuba omusha wefashini usebenza ngendlela efanayo.
Ngakho-ke, ake sithathe ukubukeka kwesinyathelo ngesinyathelo ukuthi kuhle kangakanani ukubamba umdwebo we-flash:
Isikhumba kufanele sibe somile futhi sihlanzeke, singenayo imifucumfucu, ama-lotions, amafutha, ngisho noma asetshenziswa amahora ambalwa ngaphambi kwenqubo. Ukuze wenze lokhu, geza indawo oyifunayo ngesepha futhi usule nge-remedy eline-alcohol. Komile ngokuphelele.
Sika iphethini oyifunayo esiseduze ngangokunokwenzeka emaphethelweni ayo. Lokhu kudingekile ukuze kuqondiswe kangcono nge-gluing yayo, ikakhulu uma kuziwa emigexo namasongo. Ngendlela, lezi zakhi zidinga ukwenziwa ubude obudingekayo kanye.
Susa ifilimu evikelayo bese ubeka isitika emzimbeni. Kungcono ukubuza umngane ukuthi akwenze - ngakho isikhumba ngeke sithinte noma sibuthe imibimbi.
Manje umisa ngokucophelela isitika ngesiponji esincane noma ngendwangu bese ubamba kule ndawo imizuzwana engu-30.
Susa iphepha - iphethini kufanele ihlale esikhumbeni. Yiphakamise kancane nge siponji esinamanzi.
Vumela iphethini ukuba yomile imizuzu engu-20 - ungayithinti bese uzama ukungalula noma ukuhlanekela isikhumba.
Yini engingayenza ukuze ngigcine umdwebo isikhathi eside nokuthi ungakususa kanjani?
Uma ulandela imiyalo yethu yokuthi ungamathisela kanjani umdwebo we-flash, khona-ke uzohlala izinsuku ezingu-4-6.
Njengoba ukwakheka okunamathelayo kunomswakama, ungakwazi ukugeza ngokuphepha, ugibele echibini noma ulwandle futhi ungesabi ukuthi lo tattoo uzogeza.
Imidwebo ibonakala inhle esikhumbeni esincibilikisiwe, ngakho-ke ukuzisebenzisa nge-autosunburn kuyinhlangano yama-fashionistas amaningi ngaphambi kokuwasebenzisa. Kodwa kufanele ulinde kuze kube yilapho umbala ukhonjisiwe esikhumbeni futhi okungenani kanye uthathe ishazi ukuze ugeze izinsalela zefomula yekhilimu.
Noma yimaphi amafutha nezimonyo eziqukethe - ama-lotions, ama-tanning agents, ama-gels anokuphuza amanzi kanye nesobho - asusa umdwebo we-tattoo, futhi aphephe ngokushesha.
Sicela uqaphele ukuthi kusuka emaphethini esikhumbeni azohlala ezindaweni ezingafakiwe. Uma iphethini iqala ukulahlekelwa ukukhanya noma ukukhathazeka kwayo, ingahlanzwa kalula ngamafutha anomnakekela izingane, ikhukhunathi noma amafutha omnqumo.
Kuphi ukunamathela i-flash-tattoo?
Uhamba ngezinyawo zokuhamba olwandle noma iqembu? Bese useza ukukhanya futhi ususe ukwesaba ukulahlekelwa ubucwebe emanzini noma kumdanso wokudansa. Njengoba uswazi kakade ukuthi unamathele kanjani i-flash-tattoo, sekuyisikhathi sokunquma endaweni efanelekayo yokudweba:
Umkhumbi nesifuba - imigexo nobuhlalu benziwa nje kulolu hlobo, kunamaphetheni ngendlela yamaketanga asemfashini omzimba, aguguwe nge-swimsuit.
Isikristali kanye nezibikezelo - ukukhetha kwamasongo kuzokugubha, futhi ungakhohlwa ukuthi uhlaka olubanzi luyakwamukelwa kuphela, ngakho-ke amaphethini amathathu, ama-3, namanye angaphezulu azobukeka abefashini futhi ahlelekile.
Iminwe - izindandatho ezincane ezikhazimulayo azifanelekile kuphela ehlobo, kodwa futhi nasekwindla yokuqala.
Ingemuva yindawo ekahle yemidwebo emikhulu, engabekwa esihlalweni, phakathi kwamahlombe ehlombe, noma emagqeni ehlombe, noma izinga lomgogodla.
Izinyawo - isimiso sokuhlelwa kwamaphethini kufana nalokho okusetshenziselwa ezintendeni zezandla: amasongo, amaphethini ahlukanisiwe, amasongo.
Ubuso - ngenkathi izithombe ezijwayelekile ebusweni zibukeka zingavamile, ama-flash tattoos alahlekelwa yi-charm yabo, uma ubona isilinganiso. Sula amaqembu noma imibuthano encane kuma-cheekbones noma ngaphezulu kwamashiya azobukeka asesimweni esingajwayelekile futhi engavamile.
Ngaphezu kwezindandatho ezikhazimulayo, yenza umuthi ohlakaniphile. Indlela yokunamathela i-flash-tattoo ngezipikili?
Le nqubo ilula:
Yenza umuthi wombala owodwa: ijazi lesisekelo kanye nezingxenye ezingu-1-2 ze-varnish emnyama.
Linda kuze kube yilapho isitsha sezinsikili somile ngokuphelele.
Nquma amaphethini amancane, susa ifilimu evikelayo futhi unamathisele ishidi ngezinduku kulesi sikhungo.
I-wet it, linda amasekhondi angu-30.
Susa isitaki. Cishe, iphethini izohlala esikhumbeni ezungeze izipikili. Ingasuswa nge-swab yekotini kanye ne-remover yama-polish remover evamile.
Ukwenza umuthi ube womelele, ukumboza ngobumnene izipikili ezinemibala evikelayo.
Njengoba ungabona, kunezindawo eziningi zokusebenzisa ama-tattoos e-flash, futhi kunoma yikuphi ukubukeka okumangalisayo.